မိုးရွာပြီး တဲ့ အချိန် ဗွက်အိုင်ထဲမှာ ဆော့ကစားနေ တဲ့ ကလေးငယ် ကို မိခင်ဖြစ်သူက ရိုက်ဖို့ တုတ်ကိုင်ပြီး သွားလိုက် သော အခါ . . . – Let Pan Daily
မိုးရွာပြီး တဲ့ အချိန် ဗွက်အိုင်ထဲမှာ ဆော့ကစားနေ တဲ့ ကလေးငယ် ကို မိခင်ဖြစ်သူက ရိုက်ဖို့ တုတ်ကိုင်ပြီး သွားလိုက် သော အခါ . . .
Let Pan | June 8, 2020 | Knowledge | No Comments
မိုးရွာပြီးတဲ့ အချိန် ဗွက်အိုင်ထဲမှာ ဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးငယ် ကို မိခင်ဖြစ်သူက ရိုက်ဖို့ တုတ်ကိုင်ပြီး သွားလိုက် သောအခါ . . .
မိုးရွာပြီးတဲ့ အချိန် ဗွက်အိုင်ထဲမှာ သူကစားနေတာပေါ့။ ဗွက်အိုင်ထဲမှာ ဆင်ကြီးလို လေးဖက်ထောက်ကြီး တွားသွားလိုက်၊ဗွက်တွေကို ဖင်ခုထိုင်လိုက်နဲ့။ ပုစွန်လုံးပေါက်လေးတွေကို ဖမ်းလိုက်၊ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်။သူ့ဘာသာသူ သဘောတွေကျပြီး တခစ်ခစ်ရယ် နေတတ်သေးတာ။သူဘာလို့ အဲဒီလောက်ပျော်နေပါလိမ့် ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိ။ သူကတော့ဘယ်သူ့မှဂရုစိုက်ဘဲ ပျော်နေတာပဲ။မကြာပါဘူး။ သူ့အမေက တုတ်ကြီးကိုင်ပြီးလာတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့အနားမရောက်ခင်ကတည်းက သူ့ကိုကြိမ်းလာတာ။သူ့မျက်နှာမှာ ခုနကပျော်နေတာတွေ ဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိ။မျက်နှာက ညှိုးလာတယ်။ မျက်လုံးကလေးတွေကိုကြည့်တော့ ကြောက်နေမှန်း သိသာတယ်။
“နင်လာစမ်း၊အဲဒီဗွက်တွေထဲမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ။”သူ့အမေကခေါ်နေပေမဲ့ သူက ချက်ချင်းမသွားဘူး။ ထိုင်လျက်ပဲ။သူ့အမေ ပိုပြီးဒေါပွလာပြီ။ “ဟဲ့၊ငါပြောနေတာမကြားဘူးလား။” ပြောလည်းပြော သူ့အနားလည်းရောက်သွားပြီး ရိုက်မယ်လို့တုတ်ကိုလှမ်းအမြှောက်မှာ ကျွန်တော်က “အစ်မ”လို့ ခေါ်လိုက်တယ်။သူ့အမေက သူ့ကို မရိုက်မိလိုက်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်က “ဘာဖြစ်လို့ ကလေးကို ရိုက်မှာလဲ”လို့မေးလိုက်တယ်။သူ့အမေ ကြောင်သွားတယ်။ “နင်မမြင်ဘူးလား။သူ ဗွက်ထဲမှာ ကမြင်းကြောထနေတာ”တဲ့။အဲဒါကြောင့် ရိုက်မှာလား။” ကျွန်တော် ပြန်မေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ “အစ်မ၊အစ်မရော အဲဒီဗွက်ထဲမှာ မကစားချင်ဘူးလား”လို့ ဆက်မေးလိုက်တယ်။သူ့အဖြေက “ဟဲ့။ကလေးကလားတွေ လာမမေးနဲ့။ ငါက အဲဒီလိုကစားရအောင် ကလေးလား”တဲ့။ကျွန်တော်လည်းပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အစ်မလိုပဲ။ ဒီလောက်ညစ်ပတ်နေတဲ့ ဗွက်အိုင်ထဲမှာ မကစားချင်ဘူးလို့။
“အစ်မသိလား။ တချို့ပျော်ရွှင်မှု တွေက အသက်အပိုင်းအခြားလိုက်ပဲရတာ အစ်မ။အခု ကျွန်တော်တို့လိုပဲ။ သူလည်း ကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်လာရင် ဒီဗွက်တွေထဲမှာ ကစားချင်ဦးမယ်လို့အစ်မထင်လား။တကယ်လို့ကစားပြီဆိုရင်လည်း အခုလို သူပျော်ဦးမယ်လို့ အစ်မထင်လား။”ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ သူတွေသွားတယ်။ခဏလေးပဲ။ပြီးတော့“ဖျားနာကုန်မှာ စိုးလို့ပါ မောင်လေးရယ်”တဲ့။အစ်မရယ်။ စိတ်ပူလို့ပါ၊ထိခိုက်မိမှာစိုးလို့ပါ၊ ဖျားနာကုန်မှာစိုးလို့ပါ ဆိုတဲ့ အစ်မရဲ့ခံစားချက်တစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့ ကလေးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကို မသတ်လိုက်ပါနဲ့။သူအရွယ်ရောက်လာလို့ ခုလိုဗွက်ထဲမှာကလေးတစ်ယောက် ကစားနေတာမြင်ရင် ငါငယ်ငယ်တုန်း က အခုလို မကစားခဲ့ရဘူးဆိုပြီး တွေးမိရင် အစ်မမှာ အပြစ်မကင်းဘူးနော်။တကယ်လို့ အဲဒီလို မတွေးမိဘူးပဲထား။ပျော်ရမဲ့အချိန်မှာ မပျော်ခဲ့ရတဲ့သူ့အဖြစ်က ဘယ်လောက်သနားစရာကောင်းလိုက်မလဲဆိုတာ အစ်မတွေးကြည့်ဖူးလား။”သူ့ဆီက ဘာစကားမှ ထွက်မလာတော့ဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က ဆက်မေးတယ်။ အစ်မကော၊ငယ်ငယ်က အခုလို မကစားခဲ့ဘူးလား။” သူပြုံးလာတယ်။ “ခဏခဏပဲ။ အမေသိသွားလို့ အရိုက်ခံရတာလည်း ခဏခဏပဲ။”ဒါနဲ့များ အစ်မရယ်။ ကဲ ဒီတော့ အစ်မ ကလေးကို ရိုက်ဦးမှာလား။”သူ တုတ်ကိုချလိုက်တယ်။ ပြီတာ့ သူ့သားဘက်ကိုလှည့်ပြီး “ချမ်းရင် အိမ်ပြန်ခဲ့နော်” ဆိုပြီး အိမ်ပြန်သွားတယ်။ ကလေးက ကျွန်တော့်ကို ရယ်ပြတယ်။ သူ့အမေက မရိုက်ပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ကို အများကြီး ရိုက်လိုက်တယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ။
၂၀၂၀ နှစ် အလယ်ပိုင်းက စလို့ ကံကောင်းခြင်း တွေကြုံရ မယ့် ရာသီခွင်(၅)ခု…
” မပြုေ ကာင်း မပြုသင့် “
“နှာခေါင်းစည်း” တပ်တာ ဘာကြောင့် နှာခေါင်းဖော် ထားတာလဲ?
ကိုဗစ် ကုသဆေး REMDSIVIR ဆေးတစ်လုံး ကို ကန်ဒေါ်လာ ( ၃၉၀ ) သတ်မှတ် မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် ( ၅၄၀,၀၀၀) ဝန်းကျင် ရှိနေ